Ciladaha Diyaaradaha Airbus A350-900 XWB
Su'aal Ciladaha Diyaaradaha Airbus A350-900 XWB
sano 2 3 bilood ka hor #303 by Colonelwing
Kuwa raadinaya waxa ay u muuqdaan run dhab ah oo si fiican loo sameeyey A350 ee habka bixinta.
Waxba kama ogin badeecadaas, laakiin waxa aan ka akhriyay dib u eegista, waxay u egtahay mid weyn.
Doorashadaada, maadaama aanan laheyn xiriir dhow oo la leh alaabtaas kor ku xusan.
Waxaa laga yaabaa in qofku buuxiyo oo uu ka hadlo wax badan, u dareemo lacag la'aan si aad u ogaatid kuwa Geela ...
sano 2 3 bilood ka hor #304 by Dariussssss
Diyaarad sidan oo kale ah ayaa sameeyn doonta tijaabooyin kale, sida P3D iyo X-Plane ....
sano 2 3 bilood ka hor #315 by JanneAir15
Waxay u egtahay mid fiican oo aan u maleynayo in aan heli karayo sababtoo ah waxaan eegay sidoo kale A350 wanaagsan waxaanan u maleynayaa in kan kan yahay laakiin waxaan sidoo kale raadinayaa A380 wanaagsan. Qofka fadlan ma ii soo jeedin karaa haddii aad taqaano Airbus A380 wanaagsan oo leh karti ah inaad ku darto hab nololeedka. Waxaan abuuray mawduuc la yiraahdo "talooyin diyaaradeed" sidaa daraadeed haddii aad leedahay talooyin ku saabsan A380 fadlan ii sheeg.
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #321 by Colonelwing
Doorasho wanaagsan oo ah in Airbus A350-900 XWB, Xusuusnow waa for XPlane oo aan weli FSX
Kaliya iska hubso in uu kugu dhaco duufaan XPlane Sim ...
Ma jirto wax yar oo aan u maleynayo in ay tahay mid cajiib leh in xitaa iyada oo aan la helin dukumiintiga waxqabad ee shaqaale ah ee shaqaale ah oo la sii daayay weli Ciladaha Flight ayaa u suurtagashay in ay jiidaan oo ay sameeyaan A350 oo la rumaysan karo X-diyaaradda. Waxaan rajeynayaa soo noqoshada soo socota ee soo socota. Waxaan ku fekerayaa sannadka ay dadka isticmaala FSX / P3D awoodi doonaan inay duulaan Airbus A350.
sano 2 3 bilood ka hor #323 by JanneAir15
Hello! Waad ku mahadsan tahay macluumaadka maxaa yeelay waxaan haystaa FSX laakiin waxaa jira A350 Aerosoft oo loogu talagalay FSX.
Magacaygu waa Janne (maaha Jeanne) mana ihi haween!
sano 2 3 bilood ka hor #324 by Colonelwing
Haddaba waan ka xumahay, macluumaad ayaa la saxay ...